Godin: fahatsapana vs famakafakana | Martech Zone
Godin: fahiratan-tsaina vs famakafakana
Alarobia, Jolay 26, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Nametraka fanontaniana lehibe i Seth izay mazàna dia teboka fifandirana ho an'ireo Mpitantana Vokatra Varotra… Mandeha amin'ny Intuition na Analysis ianao?
Ny fahitako manokana an'io dia ianao dia fampifangaroana marefo amin'ireo. Rehefa mieritreritra momba ny famakafakana aho dia mieritreritra data. Mety ho tahirin-kevitra momba ny fifaninanana, fampiasana, hevitra, loharano ary famokarana. Ny olana dia miankina amin'ny tantara ny famakafakana fa tsy ny fanavaozana sy ny ho avy.
Nandritra ny niasa tamin'ny indostrian'ny haino aman-jery hafa, hitako fa ny famakafakana no lakilen'ny fanapahan-kevitra rehetra. Tsy dia nisy zava-baovao io. Ireo mpitarika indostrialy dia nandinika magazine indostrialy fotsiny ary niandry mandra-pahatongan'ny olon-kafa nanao zavatra izay nanaporofo fa tsara ?? Avy eo izy ireo dia hiezaka ny handray azy io. Ny vokatra dia indostria ho faty miaraka amin'ny fanavaozana zara raha misy.
Ny faharanitan-tsaina kosa dia mety hamitaka. Ny fandraisana fanapahan-kevitra nefa tsy mamakafaka tanteraka ny angon-drakitra sy mifanakalo hevitra momba ny hevitrao amin'ireo manam-pahaizana na mpanjifa hafa dia mety hampidi-doza. Ny fomba fijerin'ny mpanjifa dia tsy mitovy amin'ny an'ny mpamatsy. Ka - fahombiazan'ny mpamatsy vola amin'ny fanaovana intuitive mavesatra ny fanapahan-kevitra amin'ny fahaizany mamaky ny tsena. Fomba mampidi-doza koa ny marimaritra iraisana. Mitanisa Famoizam-po.com:
â ?? Misy flakes tsy manimba vitsivitsy miara-miasa afaka mamoaka avalanche fandringanana.â ???
Heveriko fa nidina tamin'ny "toetran-doza mety hitranga" daholo izany ???. Firy ny risika anananao na ny fikambananao vonona handray an-tsaina ny / sy ny fandinihanao. Raha toa ka milamina tsara foana ianao, dia hisy olona handalo anao mividy izay vonona handray risika. Raha toa ianao ka mandray risika foana, dia efa antomotra ny tsy fahombiazan'ny loza.
Amin'ny famokarana vokatra dia mino aho fa afaka dinihina ny fandinihana, raha toa ka voafaritra tsara ny risika sy ny sandany. Mendrika hodinihina ny risika be, miaraka amin'ny sanda ambony. Ny risika be, ny sandany ambany dia hitarika amin'ny fahafatesanao. Ny fitantanana ny risika no lakilen'ny fandraisana fanapahan-kevitra mety. Ny fitantanana risika dia tsy tokony hafangaro amin'ny tsy fandriampahalemana, na izany aza!
My Freakonomics - Tehirizo amin'ny karama tsara kokoa ny teti-bolanao
Ny vokatra Digg: atiny tsara + Tambajotra sosialy = HITS BIG